Real Madrid oo Xasuuqday Granada iyo Ronaldo oo Shan Gool Dhaliyay “Sawirro” – Radio Muqdisho
Kooxda Real Madrid ayaa garoonkeeda Santiago Bernabeu ku xasuuqday oo 9-1 uga badisay kooxda Granada.
Ciyaaryahan Gareth Bale ayaa daah furay daadka goolsha ee kooxda Real Madrid,isagoo daqiiqadii 25-aad ee ciyaarta goolka koowaad ku hubsaday shabaqa kooxda Granada.
Ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa sideed daqiiqo kooxda Real Madrid ugu dhaliyay sedax gool hat-trick,sidasi ayaana lagu kala nastay qeybtii hore ee ciyaarta.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa sedaxda gool kala dhaliyay daqiiqadihii 30-aad, 36-aad iyo 38-aad.
Ciyaaryahan Ronaldo ayaa sidoo kale qeybtii danbe ee ciyaarta dhaliyay labo gool oo kale u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Ronaldo ayaa ayaa 36-gool ku hogaaminayo gool dhalinta horyaalka Spain ee La Liga.
Ciyaaryahan Karim Benzema ayaa qeybtii danbe ee ciyaarta labo gool u dhaliyay kooxda Real Madrid.
Ciyaaryahan Diego Mainz ayaa goolka sagaalaad ka dhaliyay kooxdiisa Granada.
Kooxda Real Madrid oo uu hogaamiyo macalin Carlo Ancelotti ayaa hal dhibic u soo jirsaday kooda Barcelona oo caawo la ciyaareyso kooxda Celta Vigo.
Kooxda Real Madrid ayaa kaalinta labaad uga jirto kala horeynta horyaalka Spain ee La Liga,waxana ay leedahay 67-dhibcood,halka kooxda Granada ay ka mid tahay sedaxda kooxood ee horyaalka ugu hooseeya.